EU iyo Turkiga oo maanta ka wadohadlaya arrimaha qaxootiga - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
sawir: Yvonne Åsell/TT och Johanna Melén/Sveriges Radio.
EU iyo Turkiga oo maanta ka wadohadlaya arrimaha qaxootiga
La daabacay måndag 7 mars 2016 kl 12.44
Maanta hogaamishaa wadamada Midowga Yurub ayaa kulan la yeelan doona madax ka socota dalka Turkiga.
Kulankan ayaa lagu eegi doonaa halka ay marayso wadoshaqeynta u dhaxeysa EU iyo Turkiga. Gaar ahaan waxaa kulankan looga hadlayaa sidii Turkiga uu gacan uga geysan lahaa yareynta qaxootiga waddankas xaduudahiisa ka soo tillaabaya ee soo galaya dalka Geriiga.
Anders Ygeman wasiirka arrimaha gudaha Sweden oo xalay lagu wareysanyey barnaamijka Aganda ee ka baxa telefishinka SVT ayuu wasiirka kaga hadlay waxa Sweden ka filayso in ay ka soo baxaan kulankan EU la yeelaneyso madax ka socota dalka Turkiga:
Arrinka koobaad ee aan fileyno waxuu yahay in la hagaajiyo xaaladaha ay wajahayaan qaxootiga Turkiga soo gaaraya ama hadda ku sugan la hagaajiyo. Maanta 2,6 miljan oo Suuriyaan soo qaxay ayaa ku sugan dalka Turkiga. Waa in loo abuuro fursado ay waddankas gudahiisa uga shaqeysan karaan iyo hooy ay ku nooladaan, carruutooda iskuulo u helaan. Midda kale ee ka fileyno kulnka waxay tahay in EU sugto xaduudaheeda u dhaxeeya Geriiga iyo Turkiga. Halka midda saddexaad ay tahay in la bauuro dhabayaal sharciya oo qaxootiga ku soo geli karaan Yurub oo iyaga oo joogaa Turkiga, Urdun ama Libanon ay soo dalban karaan dib u dejin Yurub gudaheeda ah, ayuu yeri Anders Ygeman.
Laakiin in Yurub wadoshaqeyn la yeelato Turkiga waxaa jira dhaleceeyn gudaha Sweden looga jeedinayo, tusaale afhayeenka xisbiga Vänsterpartiet Hans Linde ayaa u arka qalad EU la shaqeyso Turkiga.
- Dowladda Sweden waa in ay kalo cadeyso in ay dooneyso cod in ay u ahaato xaquuqul insaanka iyo demokaraatiyadda caalamka iyo in kale. Suurtogal ma ahan inta baarlamaanka Sweden la hor istaago la yiraahdo waxaan difaaceynaa xaquuqul insaanka islamarkaana malaayiin lacag ah lagu taageero rejim keligii taliye ah oo ku tunta xaquuqda muwaadiniintiisa, joogtana ugu tunta xaquuqda magangeliyada isagoo adeegsnaya lacagta uu ka helo dowladdaha EU, ayuu yeri Hans Linde afhayeenka xisbiga Vänsterpartiet.
Laakiin wasiirka arrimaha gudaha Anders Ygeman ayaa dhaleeceyntas loo jeedinayo dowladda guud ahaanteeda iska leexiyey.
- Uma qorno jeeg rejimka Turkiga. Waxaanse taakuleynaa qaxootiga ku sugan dalka Turkiga si ay u helaan nolal wanaagsan, lacagaha EU looma diro dowladda Turkiga ee mn´mashruuc ahaan ayaa loogu caawiyaan qaxootiga waddnakas ku sugan, ayuu yeri Anders Ygeman.
Waxuuna raaciyey in ay tahay lagami maarmaan in heshiis EU la gasho turkiga
- Heshiis lala galo Turkiga waa lagamo maarmaan, waayo dhabaha ugu weyn ee ay qaxootiga soo maraan . saddex Milyan oo qaxooti ah ayaa ku sugan turkiga, waxaan ka dooneynaa Turkiga in uu qaato masuuliyadda ka saaran xaduudahiisa, ayuu yeri wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda Sweden Anders Ygeman oo xlay u waramayey barnaamijka Agande ee SVT.
Isha: SVT Aganda